China Fiberglass Woven Roving mpanamboatra sy mpamatsy | Beihai Fiberglass
Lamba 1.Bidirectional vita amin'ny alàlan'ny fanodinana mivantana roving.
2.Mifanaraka amin'ireo rafitra resina marobe, toy ny polyester tsy miangona, ester vinyl, epoxy ary resins phenolika.
3.Nampiasaina betsaka tamin'ny famokarana sambo, sambo, fiaramanidina ary faritra fiara sns.
E-Glass Woven Rovings dia lamba roa sosona vita amin'ny alàlan'ny roving mivantana.
Ny Rovings E-Glass Woven dia mifanaraka amin'ny rafitra resin maro, toy ny polyester tsy vita amin'ny fo, ester vinyl, epoxy ary resins phenolika.
E-Glass Woven Roving dia fanamafisam-peo avo lenta izay be mpampiasa amin'ny fametrahana tanana sy ny fizotran'ny robot ho an'ny famokarana sambo, sambo, fiaramanidina ary kojakoja amin'ny fiara, fanaka sy fanatanjahantena.
1.Ny lozisialy ady sy kofehy mifangaro mifandanja sy fisaka
fomba, ka miteraka fihenjanana mitovy.
2. kofehy mifanentana tsara, ka miteraka refy avo lenta
fitoniana ary ataovy mora ny fikirakirana.
3. Fahaizana lasitra tsara, mando haingana sy feno amin'ny resina,
miteraka vokatra be.
4.Fangaraharana tsara sy tanjaka avo lenta amin'ny vokatra mitambatra.
Tapitra / cm ny hatevin'ny Warp
Tapitra / cm ny hatevin'ny dity
Ny lanjan'ny faritra g / m2
Votoatiny mora may (%)
Ny roving vita amin'ny kofehy tsirairay dia voadona amin'ny fantsom-taratasy izay misy savaivony anatiny 76mm ary ny hatevin'ny tsihy dia 220mm ny savaivony. Ny horonan-taratasy mifono roving dia nofonosina sarimihetsika plastika, ary avy eo fonosina anaty boaty baoritra na fonosina taratasy kraft. Ireo horonan-taratasy dia azo apetraka mitsivalana. Ho an'ny fitaterana, ny horonan-taratasy dia azo ampidirina anaty cantainer mivantana na amin'ny paleta.
Raha tsy voalaza manokana dia tokony hotehirizina amin'ny faritra maina sy mangatsiaka ary tsy misy orana io. Soso-kevitra ny hitazomana ny mari-pana sy ny hamandoana ao amin'ny 15 ℃ ～ 35 ℃ ary 35% ～ 65%.
Fepetra momba ny varotra
Fanaterana: 20 andro aorian'ny nahazoana vola
Fonosana: 40kgs / roll, 1000kgs / pallet.
Teo aloha: Vidy ambongadiny firakotra fibre vita amin'ny vera vita amin'ny tavoahangy - Fitarihana E-vera natambatra ho fanariana fanodinam-bola - Beihai Fiberglass
Manaraka: Fiberglass Wall Manarona Tissue Mat
Direct Roving ho an'ny CFRT